Kooxda Xuuthiyiinta oo isku dayaysa inay la wareegto gobolka saliidda hodanka ku ah ee Marib. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kooxda Xuuthiyiinta oo isku dayaysa inay la wareegto gobolka saliidda...
Kooxda Xuuthiyiinta oo isku dayaysa inay la wareegto gobolka saliidda hodanka ku ah ee Marib.
Previous articleWaxaa socota diyaar garowga duugta Amiir Philip, oo ah seyga Boqorad Elizabeth II, kaas oo geeriyooday shalay isagoo jira 99 sano.
Next articleWakiilka cusub ee UNICEF ee Soomaaliya oo Warqadihii aqoonsiga laga gudoomay
Magaalada Muqdisho waxaa maalmihii la soo dhaafay laga dareemayay Deganaashi dhinaca dilalka al-shabaab ay ka geysan jireen marka la gaaro Bisha Ramadaan. Ciidamada...
Madaxweynaha Xilka ka dhamaaday Farmaajo oo la talaalay
War deg deg ah: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo...